Somali News 07.06.21 | KWIT
In kasta oo xoogaa roob ah, haddana abaartii Iowa way ka sii dartay bishii la soo dhaafay, sida uu sheegay agaasimaha Waaxda Beeraha ee Mareykanka ee Midwest Climate Hub. Dennis Todey wuxuu leeyahay rajada inta ka hartay xagaaga way adagtahay in la saadaaliyo. Marka ugu fiican, Iowa wuxuu heli lahaa roob ku filan si uu u celiyo abaarta xitaa ka sii xun, ayuu saadaaliyay.
Todey wuxuu leeyahay abaarta ayaa ah tii ugu xumeyd muddo 20 sano ah, saadaasha muddada-dheerna uma baaqeyso roob badan oo ka dhaca Midwest bartamaha usbuuca soo socda.
Waxaa maanta la shaaciyay in Gudiga Adeegyada Iowa ay soo saartay amar ay ku ansaxineyso sixitaanka heerka Iowa American Water. Amarku wuxuu yimid 28 Juun ka dib markii dib loo eegay 10 bilood. Maalgelinta shirkadda ee ku dhowaad $ 87 milyan ee hagaajinta nidaamka biyaha ayaa ah darawalka koowaad ee ka dambeeya codsiga hagaajinta sicirka.
Maamulka Biden wuxuu qorsheynayaa inuu soo saaro sharci cusub oo lagu difaacayo xuquuqda beeraleyda dhaqda lo'da, digaagga, iyo hilibka doofaarka ee ka dhanka ah warshadaha waaweyn ee hilibka soo saara. Xeerku wuxuu qayb ka yahay qorshe lagu dhiirigalinayo in tartan badan laga galo waaxda beeraha.
Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland waxay martigalin doontaa xarun caafimaad oo tallaal ah COVID-19 Khamiista, Julaay 8 laga bilaabo 3:00 pm-5:00 pm galabnimada hoolka Martin Luther King, Jr. Ground Center Center ee magaalada hoose.
Hal qaadasho oo ah tallaalka Johnson & Johnson ayaa la siin doonaa dadka deggan Iowa ee jira 18 iyo wixii ka weyn. Shakhsiyaadka ayaa awoodi doona inay iska diiwaangeliyaan goobta, looma baahna diiwaangelin hore.
Rugta tallaalka dadweynaha waa dadaal kale oo lagula kulmayo dadka meesha ay joogaan iyo in la kordhiyo heerka tallaalka oo hadda ah 39% Gobolka Woodbury.